खोक्रो राष्ट्रवाद « News of Nepal
भारतले कालापानीसहितको नेपाली भूमि सुटुक्कै गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसी सो कदमको प्रतिकारमा नेपाली उत्रिया छन्। अन्य बेला मध्य हिउँदको सिरक तानातान गरेझै गर्ने सबै दलका नेता अहिले एकजुट भा’छन्। के सत्ता कित्ता के प्रतिपक्षी भारतीय कदम विरुद्ध उत्रिएसी एकै स्वरमा राष्ट्रियता घन्किएको छ।
यस्तो देख्दा धरहरा तीनछक पर्या छ, सपना र विपना झुकिन्छ। राष्ट्रियता घन्काउने माम्लामा स्वदेशीभन्दा परदेशी नेपाली दुई कदम अघि देखिया छन्। डीभी, पीआरका लागि मरिहत्ते गर्दै विदेशिने अनि राष्ट्रियताको नारा घन्काउने कुरा अलि हजम भएन कि ?
विदेशबाट सरकार, नेता/मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली गर्दैमा मुलुकले छलाङ मार्ने भए त अहिले नेपाल सिगानपुर हैन, कम्तिमा सिंगापुर बन्थ्यो।
अनि नेता महोदयज्यूहरू, मुलुकलाई आर्थिक छलाङ मार्ने अनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने माम्लामा चाहिँ राष्ट्रिय आवाज एकै गर्न कन्ज्युस्याईं किन ?
दलका भ्र्रातृ संघ, संगठन अनि नेताको दौरा, कमिज, धोती, सारी र कुर्थाको फेरो तान्दै नेताका अघिपछि गर्न मरिहत्ते गर्ने तर देश र समाजको भलोमा सँधैं हलो अड्काउनेहरूले यो माम्लामा सोच्न ढिला भइसकेन र भन्या ?